laacibfm.com » Manchester United Oo Dhamaystiray Saxeexeedii Ugu Horreeyey Ee Suuqa Dhowaanta Bilaabmi Doona Ee Xagaaga
Manchester United Oo Dhamaystiray Saxeexeedii Ugu Horreeyey Ee Suuqa Dhowaanta Bilaabmi Doona Ee Xagaaga
Manchester United ayaa dhamaystirtay saxeexa goolhayaha da’da yar ee Radek Vitek oo ka tirsan kooxda ka dhisan waddanka Czech Republic ee Sigma Olomouc.
Vitek oo ay da’diisu tahay 16 ayaa Manchester United kusoo biiri doona bisha July ee sannadkan, taas oo soo afjari doonta heshiis qayb ka mid ah lasii dhamaystiray bishii January.
Red Devils ayaa laacibkan da’da yar daba socotay illaa sannadkii 2019, waxaana qanciyey dhererkiisa iyo tayadiisa ciyaareed ee da’yaraanta kusoo ifbaxday.
Waraysi uu siiyey shabakadda kooxdiisa reer Chech ayaa waxa uu ku sheegay in heshiis uu u saxeexo Manchester United ay u tahay riyo u rumowday, isla markaana uu rumaysan kari la’yahay in uu tegayo Old Trafford.
Ladislav Minar oo ah agaasimaha kooxda uu ka tirsan yahay laacibkan yar ayaa isaguna sheegay in dhamaan naadiga Sigma ay ku faraxsan yihiin in ciyaartoy kale ay u dirayaan koox ka mid ah naadiyada sare ee Yurub.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay in Sigma ay awood u yeelatay inay u dirto mid ka mid ah ciyaartoydeeda koox sare oo Yurub ah. Socdaalka ciyaartoy sidan da’diisu u yartahay, sharaf weyn ayay noo tahay, kaliyana abaal-marin uaha kooxda laakiin sidoo kale ciyaartoyda naf ahaantiisa oo si adag u shaqeeyey.” Ayuu yidhi Ladislav Minar.
“Marka labaad, waa faa’iido dhaqaale. Haddii Radek uu u ciyaaro Manchester mustaqbalka ama uu koox kale tago, faa’iido dhaqaale oo qancisa ayaa usoo noqon doonta Sigma.” Ayuu ku daray.
Laacibkan yar ayaa ugu tegi doona Old Trafford David de Gea, Sergio Romero iyo Lee Grant, sidoo kalena waxa kusoo fool leh Dean Henderson oo kasoo laabanaya Sheffield United oo uu amaah ugu maqan yahay.